Al-shabaab Oo sheegay in ay ugaarsi uugu jiraan sidii ay ciribtiri lahaayeen madaxda dowlada soomaaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Ururka Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday inay meel waliba ku uguursan doonaan Madaxda Dowladda Soomaaliya iyo raga kale ee Dowladda ku jira.
Al-shabab aya dowlada soomaaliya waxa ay kula jiraan dagaal culus iyagoo ugaarsado melaha muhiimka ay masuuliyiinta dowlada soomaaliay ay ku suganyihiin iyo sidoo kale ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaliya.
Afhayeenka dhanka Howlgalada ee Ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay warbaahinta, ayaa sheegay inaysan shaqo kale laheyn oo aan aheyn ugaarsiga Madaxda Dowladda iyo raga kale ee dowladda ku jira.
Abuu Muscab, wuxuu sheegay inay u taagan yihiin sidii ay udhaafin lahaayeen aduunyada raga Dowladda ku jira meel waliba oo ay galaan ayuu sheegay inay ka daba tagi doonaan oo ay ku dili doonaan.
Hadalka Afhayeenka dhanka dagaalada ee Ururka Al-Shabaab, ayaa imaanaya, iyadoo habeen hore Muqdisho ay ka fuliyeen Shabaab weerar noociisa uu yahay mid gaari loo adeegsaday, kaasi oo ka dhacay Hoteelka Maka Al-Mukarama afaafkiisa.